New Day Jobs | Mobile Learning Apps | Easy To Learn in Everywhere | Career Blogs
Workplace Success Workplace Skill Personal Upgrade 22 Jan 2020
မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှတဆင့် လွယ်ကူလေ့လာနိုင်သော Mobile App များ
သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် အချိန်မအားအပ်နေသူတွေ၊ ကားတွေပိတ်နေလို့ ဘတ်ကားပေါ်မှာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချသူတွေ၊ သင်တန်းတက်ဖို့အဆင်မပြေသူများအတွက် အောက်ပါမိုဘိုင်း Apps များကနေ သင့် Career Development အတွက် အရမ်းအကျိုးရှိမှာပါ။
Duolingo ဆိုတာ ဘာသာစကားလေ့လာရေး App ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကို တစ်နေရာထဲမှာ လေ့လာလို့ရသလို သူငယ်ချင်းတွေ၊ တခြားသောလေ့လာသူတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပြီးလေ့လာလို့ရတော့ ဘာသာစကားလဲကျွမ်းကျင် မိတ်ဆွေတွေလဲတိုးပွားလာမှာပါ။ အခမဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့ App ဖြစ်ပြီး ကြော်ညာ Ads တွေနဲ့တော့ မျက်စိနှောက်တာကတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Ads Free Version ကို ဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့် မျက်စိနှောက်တာကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်ပေမဲ့ ပိုက်ဆံတော့ထွက်တာပေါ့လေ။ ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်ယူရလွယ်ကူမြန်ဆန်တာကြောင့် စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ လမ်းညွန်ပါရစေ။
တခါတလေ စာအုပ်ဖတ်ရတာ မပြီးနိုင်ဘူးလို့တွေးမိပါသလား? စာအုပ်တွေကလည်းဖတ်ရမယ် စာဖတ်ဖို့ အချိန်ကလည်းမရှိဖြစ်နေပါလား? ဒါဆိုရင် Blinkist ဆိုတဲ့ Mobile App က အဆိုပါပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲက အဓိကအကြောင်းအရာ အနှစ်ချုပ်တွေ၊ မိမိလေ့လာလိုသော ခေါင်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်လေ့လာတာတွေ၊ ထပ်ဆောင်းဆောင်းပါး အကြံပြုချက်တွေကို Blinkist ကူညီပေးနေပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွက် Free လေ့လာနိုင်တာတွေကို ရယူနိုင်သလို မိမိလေ့လာလိုတာတွေအတွက် တစ်လ 5$ နှင့် ဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
TED Talk ဆိုတာ ကမ္ဘာကျော် Idea Presentation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှုဆိုရရင် စာပေဟောပြောပွဲကြီးပေါ့။ များသောအားဖြင့် TED Talk ဟာ အင်္ဂလိပ်လို တင်ဆက်ဟောပြောကြပြီး မြန်မာပြည်အတွက်လဲ TEDx Yangon ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ TED Talk မှာက နည်းပညာအကြောင်း၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အကြံဉာဏ်သစ်တွေ၊ ဒဿနတွေကို တင်ဆက်ကြပြီး အချင်းချင်းဖလှယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေ၊ Presentation Skill ကို လေ့ကျင့်နေသူတွေ၊ Idea အသစ်အဆန်းကိုရယူလိုသူအနေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ Mobile App ပါ။
Udemy က Online Learning တစ်ခုဖြစ်ပြီး Online University တစ်ခုလို့တောင်တင်စာလို့ရပါတယ်။ အခုအခါ Udemy အပါအဝင် တခြားသော Online Learning များဟာ Mobile Apps မှာကို ထုတ်လုပ်လာပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကတဆင့် လေလာလို့ရနိုင်ပါပြီ။ Mobile Version မှာ တစ်နေ့တာပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ့လာနိုင်သလို Website လိုမျိုး တစ်နေရာထဲမှာ ထိုင်ပြီးသင်စရာမလိုအပ်ပဲ နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေးမှာ သင်ယူလာနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Desktop ကော Mobile ကော နှစ်ခုစလုံးမှာလည်း သင်ယူလာနိုင်တာကြောင့် သင့်အတွက်နေရာမရွေးပါပဲ။ များသောအားဖြင့် အတန်းတွေဟာ ဝယ်ယူပြီးလေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး အခမဲ့သင်ယူနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Mobile Apps အတွက်ကို အောက်ပါလင့်ကနေ ဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါတယ်။
Coursera ဟာ Udemy လိုမျိုး Online Learning တစ်ခုဖြစ်ပြီး စစ်တမ်းအရ Mobile ကနေ သင်ယူလေ့လာသူတွေများပြားပါတယ်။ သူလည်း Udemy လို Destop ကော Mobile ကော နှစ်ခုစလုံးမှာလည်း သင်ယူလာနိုင်တာကြောင့် သင့်အတွက် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးပါပဲ။ စမ်းသပ်လေ့လာလိုပါက ၇ ရက် အခမဲ့သုံးနိုင်ပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါက တစ်လ 49$ ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက်လေ့လာနိုင်မှာပါ။
Linkedin ကနေ အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Learning Feature တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိသွားလိုသော Career အလိုက် သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်တာတွေများပါတယ်။) ဗီဒီယိုတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ အကြံပြုချက်တွေပါဝင်တာကြောင့် သင်ယူရတာလွယ်ယူပါတယ်။ ထို့အပြင် Linkedin Profile မှာ သက်ဆိုင်ရာ Skill အနေနဲ့ ထည့်သွင်းလို့ရတာကြောင့် လူရှိန်တဲ့အပြင် အလုပ်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ သူများတွေထက်သာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိဟာ ဂိမ်းဆော့တာကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် မိမိရဲ့ တွေးခေါ်မှုနှင့် ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ “Elevate” ဆိုတဲ့ App လေးဟာ သင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာမှာပါ။ ဘာသာစကား၊ ပြဿနာဖြေရှင်းတာတွေ၊ ဦးနှောက်တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာတွေ၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နှင့် တခြားသော တီထွင်မှုဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ဂိမ်းများစွာကို ဆော့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တခြားသော Training တွေလည်းပါရှိပါတယ်။
New Day ဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို အြန္လိုင္းကေန ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။